Pathein Regional Testing Laboratory getting Set up
ပုသိမ် စပါးမျိုးစေ့ ဓါတ်ခွဲခန်း ပြင်ဆင် ပြီးစီးခြင်း
The Pathein Seed Laboratory is speedily getting operationalized. This lab will have the capacity to handle >1000 samplesayear and houses Myanmar’s first “walk-in-seed-germinator” which is thermally and optically controlled as the ISTA standards. This Lab will end the woes of the seed growers of delayed seed testing results as all of the Delta’s seeds will be tested in this lab only.
ပုသိမ်စပါးမျိုးစေ့အရည်အသွေးစမ်းသပ်ခန်းသည် လျင်မြန်စွာ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။ ဤစမ်းသပ်ခန်းသည် တနှစ်လျှင်နမူနာ ၁၀၀၀ ကိုကိုင်တွယ်နိုင်မည့် စွမ်းရည်ရှိပြီး ISTA၏ စံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်း အပူချိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိန်းသိမ်းထားသည့် မြန်မာ့ပထမ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက် စစ်ဆေးနိုင်မည့် မျိုးညှောင့်ဖောက်ခန်းလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
The Pathein Seed Testing Lab
This lab will house Myanmar's first Walk-in-Germinator and handle all of Delta's rice (and other crops) seed testing.
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအနေနဲ့ ယခုဓာတ်ခွဲခန်းတွင် အလွယ်တကူဝင်ရောက် စစ်ဆေး၍ အညှောင့်ဖောက် နိုင်သည့် အခန်းကို ထည့်သွင်းထားပြီး ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများရှိ ဆန်စပါးသာ မကဘဲ အခြားသော မျိုးစေ့များကိုလည်း စမ်းသပ် စစ်ဆေးနိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
The Walk-in-Germinator in the Pathein seed lab
Seed Lab Visit. Members from RSSD and DOA
Pathein Seed Lab: Working area
Seed Lab Visit